dimanche, 04 septembre 2016 22:24
Bakalôrea Sambava : Tsy kivy Razafisoa Jeanne, mbola vonona ny hamerina i Arlanzia
Razafisoa Jeanne, 73 taona, zokilona indrindra tamin’ireo mpiadina bakalôrea nanerana ny Nosy tamin’ity 2016 ity. Tsy nahakivy azy ny vokatra na dia fanindroany niatrehany azy tamin’ity. Nilaza ny mbola vonona ny hiatrika fanadinana izy amin’ny taona ho avy. Toy izany koa i Tsiampoizina Arlanzia, ilay tovovavy 18 taona, nihetsi-jaza ary teraka tao an-tranony ny alin’ny alarobia 3 aogositra 2016 tamin’ny 10 ora, andro fahatelon’ny bakalôrea, rehefa nakana mpitsabo manokana saingy maty teo ampiterahana ny zanany, vavikely milanja 4kg teo. Mbola nikiry namita ny fanadinana i Arlanzia ny ampitson’io. Samy “série A2” izy mianaka ireo, niadina tao amin’ny Ceg Centre eto Sambava. 29,45% ny tapam-pahafahana bakalorea teto Sambava tamin’ity.
dimanche, 04 septembre 2016 17:13
Sambava : Tovovavy 19 taona avy any Fianarantsoa mirenireny tsy fidiny
Noroahin’ny mpampiasa azy teto Sambava ity tovovavy antsoina hoe Rasoanirina Tombojanahary Claudine, 19 taona, ary tsy mahita haleha nefa tsy ampy vola hamonjena ny ray aman-dreniny any Fianarantsoa. Efatra volana lasa izay no nisy mpampiasa sendra nandalo tany Fianarantsoa ka nahita azy dia nangataka azy tamin’ny reniny, Rasoa Mpamonjy monina ao Amontana Fianarantsoa fa alaina andeha hiasa aty Sambava, mba hikarakara ankizy madinika ao an-tokantranon’izy mivady ihany. Nony tonga taty anefa ity tovovavy ity dia nitombo ny asa ary mafy ka tsy zaka ka niteraka aretina ary nahatafiditra azy hopitaly tamin’ny farany volana Mey. Nony nivoaka hopitaly i Rasoanirina Tombojanahary Claudine dia nilaza taminy ny mpampiasa azy fa ankizivavy marefo ka tsy hahavita ny asanay ka najanony tsy hiasa ao amin’izy ireo, ary nomena vola fito alina Ariary.
jeudi, 01 septembre 2016 19:30
Sambava : Nizara solomaso eklipsa maimaimpoana ny Lions Club
Androany 1 Septambra nanomboka tamin’ny fito ora maraina dia nizara solomaso eklipsa tamin’ny vahoaka teto Sambava ny Fikambanana Lions Club, ka ny filohany Atoa Tsapapa no nitarika izany. Nahatsapa ry zareo fa tsy ampy ny solomaso taty Sambava, ary na nisy aza dia tsy ny olona rehetra no nahavidy ny solomaso tamin’ny vidiny 1500Ar nefa mba nanam-paniriana hibanjina izany eklipsa izany ampahatoniana. Nanomboka tao amin’ny Fokontany Antohomaro, Kaominina Farahalana no nizarana izany izay vao niditra teto amin’ny vohitra Ambodisatrana-Antaimby-Antanifotsy ary ny Soavinandriana ka nifarana tao Ambarimiambana 8km miala Sambava. Nanoritra anefa ny filohan’ny Lions Club eto Sambava fa tsy ny rehetra no nahazo anjara tamin’izao hetsika izao fa ireo zokiolona, ireo fianakaviana sahirana ary ireo mpitari-posy no nomena, hany ka nifandrombahana izay nahazo, na dia nanampy tamin’ny fandaminana aza ny lehiben’ny Fokontany tamin’ny tanàna nisian’ny fizarana solomaso.
jeudi, 01 septembre 2016 15:29
Sary Sobika Manakara
Vatovavy Fitovinany : Noterena nanao taratasy ireo mpampianatra nitokona
Nizotra indray ny fiofanan’ireo mpampianatra eto amin’ny DREN Vatovavy Fitovinany rehefa niato noho ny fitokonana fitakiana vola tambin-mpiofanana. Raha ny nambaran’ny mpampianatra mpiofana iray dia nitokona teto Manakara anaovana fanofanana tokoa izy ireo ary tsy nanatrika ny fiofanana nandritra ny herinandro nitaky ny fanondrotana ny tambiny izay efa nampahafantarina azy kanefa nihena teny am-pandehanana. Tsy nivaly anefa ny fangatahan’izy ireo ka noterena mba hanao taratasy izy ireo fa vonona ny tsy hiatrika intsony ny fiofanana. Noho ny tahotra indray dia niverina niofana izy ireo ary nasaina nanao taratasy fangatahana mba hanohy ny fiofanana ary nampanaovina karazana taratasy fifanekena na « Engagement », fa tsy hitokona intsony. Nambaran’ireo mpampianatra moa fa tahotra amin’ny ambadika mety hitranga dia nanaiky izy ireo satria ilainy ihany ny fiofanana. Rava tanteraka araka izany ilay fitakiana kanefa dia tsy mbola nadray ny tambin’ny fiofanana ampahany tokony ho azony izy ireo.
mardi, 30 août 2016 15:22
Anosiakamba-Soalala : Botry rendrika, mpandeha 11 tsy hita popoka
Botry iray no dobo raha saika hihazo an’i Soalala, ny alin’ny alahady hifoha ny alatsinainy 29 aogositra tokony ho tamin’ny 2 ora maraina. Rehefa tonga teny amin'ny faritra antsoina hoe : Anosiakamba no vaky tampoka io botry io ka nidiran’ny rano. Niezaka nanala ny rano ny mpanamory saingy tsy afaka intsony nohon'ny fidiran'ny rano be loatra tao anatiny ka dia nilentika nahazo farany tany ilay botry. Samy nanavotra ny ainy ireo mpandeha miisa 12 tao anatiny. Tsy hita anefa ireo mpandeha 11 ka ilay mpanamory azy sisa no afaka nilomano namonjy ny tanety. Ny harivan’ny alatsinainy 29 aogositra tamin’ny 5 ora vao tonga an-tanety io mpanamory io.
Ihosy : Raikitra ny Lalao Ombilahy Betsifa
Nanomboka aty Ihosy ny sabotsy 27 aogositra ny Lalao Ombilahy Betsifa. Hetsika izay ahitana fifaninana ara-panatanjahantena sy kolotoraly izy ity. Saika nahatonga solontena ireo faritra mifanila-bodirindrina amin'ny Faritra Ihorombe. Ny lanonam-panokafana dia natao tao amin'ny kianja monisipaly, izay nisian'ny filaharan'ireo mpandray anjara sy ny fihanianan'ireo mpitsara sy ny solontenan'ny mpilalao. Ny solombavambahoaka aty Ihosy, Ralava no tompomarika amin'izao Lalao Ombilahy Betsifa izao. Ny 4 septambra izao no hifarana ity lalao ity ka ho faranana amin'ny rindrakira hiarahana amin'i Black Nadia.
dimanche, 28 août 2016 09:19
Mahamasina: Fanentanana momba ny solomaso eklipsa
Nisy ny fanentanana momba ny fampiasana ilay solomaso ho entina hijery ny Eclipse solaire izay notontosaina tetsy anoloan'ny vavahadin'ny kianjan'ny Mahamasina, nisy ny fanentanana maro samihafa nataon'ireo mpanakanto toy an'i Princio, Tsiliva sns.... Marihina moa fa dia amin'ny voalohan'ny volana Septambra ho avy izao no hiseho eto Madagasikara ny Eclipse solaire. Ny nanaitra ny maro dia ny fandaniam-bola be amin'ny fakana artista hanao fanentanana, ka hoy ireo nandalo teny hoe, maninona raha tonga dia nozaraina fotsiny ireny solomaso ireny rehefa samy andany vola hanofa sono sy mpanakanto maro ihany? Nefa isika ireto vitsy kely ny miatrika fanentanana eto. 1 500 ariary tokoa manko no amarotana ity solomaso ity, ary araky ny resaka anjorony teny dia ny hoe sao mba bizina indray ity resaka ity, ka namaly ilay ramatoa efa lehibe nanao hoe, angaha io azo tehirizina ampiasaina amin'ny manaraka indray, satria afaka aman-taonany maro indray vao misy an'io "apokalipsa" io ka tsy ho zarainy fotsiny ihany ve io rehefa tsy misy mpividy?
dimanche, 28 août 2016 08:43
Antsirabe : Vehivavy marary saina, maty teo am-piterahana
Vehivavy iray marary saina, tokony ho 30 taona eo, no maty teo am-piterahana ny sabotsy 27 aogositra tolakandro, teo atsimon’ny Lycée André Resampa Antsirabe. Tsy nisy nanampo ny olona fa hiteraka ity tovovavy ity raha nahita azy nidina tao anatin’ny tatatra maina tsy misy rano, teo an-tsisindalana, hay nihetsi-jaza izy. Ny tongotr’ilay zaza no nivoaka mialoha ary saro-piterahana ilay tovovavy, izy rahateo niady irery tsy nisy nanampy. Vokany, tsy tafavoaka fa tavela teo anelanelan’ny feny ilay zaza ary niafara tamin’ny fahafatesan'ny reniny sy ilay zaza izany.
samedi, 27 août 2016 13:51
Fonkotany Ambohitrarahaba : Misavoritaka tanteraka
Mitaraina ireo mponina ao amin’ny fonkotanin’Ambohitrarahaba noho ny tsy firindran’ny fiaraha-monina. Notampenan’olon-tsotra iray mantsy ny lalan-kely iray izay fandehanan’ny mponina hany ka lasa voatery manalavi-dalàna ny mpiantsena ary ho sahirana ihany koa ny mpianatra satria misy sekoly ao akaik’ilay toerana. Raha ny feo mandeha dia, nisy nividy ny tokontany tandrify io lalàna io ka ny mpividy no namefy ny toerana. Tsy namela na dia iray metatra handehann’ny mpandalo akory.
Lieutenant RAVELONA Celsius, Cdt compagnie Farafangana
jeudi, 25 août 2016 17:26
Farafangana : Rava ny tambazotra mpamaky trano
Tao anatin'ny iray volana izay dia sesilany mihitsy ny vakitrano miaraka amin'ny fitaovam-piadiana teto Farafangana renivohitra. Isany lasibatra amin'izany ireny biraom-panjakana sy ireo “multi-service” ka ireo fitaovana informatika no angalariny. Ankoatra ny halatra dia mampiasa herisetra amin'ny alalan'ny zava-maranitra ireo jiolahy. Manoloana izay indrindra dia nandray andraikitra ny Emmo.Dist, izay tarihin'ny Lieutenant Ravelona Serge Celsius, komandin'ny kompanian'ny Zandarimariam-pirenena Farafangana, ny Commissaire divisionnaire Andrianony Philibert ary ny Lieutenant Sondromananarivo Fanjanirina Vitrice, Commandant d'armes, ka manatanteraka fisafoana mandritry ny alina hiarahan'ny mpitandro filaminana rehetra. Nahitam-bokany avy hatrany izany satria teo am-panaovana ny asa ratsiny ireto jiolahy no nifanena tamin'ny mpitandro filaminana nanao ny fisafoana amin'ny alina. Nikasa hikapoka tamin'ny famaky an'ireo Zandary izy ireto ka voatery tsy maintsy nitifitra ka voa teo amin'ny kibony ny iray tamin'izy ireo ary ny iray voasambotra ka ity farany indray no nanoro ny toerana misy ny namany. Telolahy no sarona fa ilay iray voatifitra kosa tsy tana ny ainy tany amin'ny hopitaly ny ampitson'iny.